Ekipa famoahana an'ny Thermorecetas - Mpahandro miaraka amin'i Thermomix | ThermoRecipes
Thermorecetas no bilaogy mitarika momba ny fomba fahandro vita amin'ny Thermomix any Espana ary iray amin'ireo zava-dehibe indrindra amin'ny sehatry ny lakozia amin'ny ankapobeny. Izy io dia teboka fihaonana isan'andro ho an'ireo rehetra tia sakafo amin'ny ankapobeny ary indrindra ho an'ireo rehetra mampiasa ny Thermomix.
Ny tranonkala nanomboka tamin'ny 2010 ary nanomboka teo isan'andro dia mamoaka fomba fahandro mahazatra iray (na maromaro) izahay mba hahafahan'ny tsirairay manamboatra ao an-dakozia. Manana fomba fahandro isan-karazany izahay, amin'ny tsiro rehetra ary ampifanarahana amin'ny ambaratonga rehetra, manomboka amin'ny fiomanana be pitsiny ka hatramin'ny tsotra kokoa izay azo atao ao anatin'ny 30 minitra ary miaraka amin'ny fahalalana fahandro tena lehibe.
ihany koa nandefa boky maromaro izahay araka ny hitanao ato amin'ity fizarana ity. Amin'izao fotoana izao dia manana isika Boky 2 navoaka niaraka tamin'i Anaya amidy tsara tokoa izany ary namoaka boky maromaro amin'ny endrika nomerika toa ny bokin'i Manorata fomba fahandro hatao ao anaty 30 minitra. Niara-niasa tamin'ny ONG koa izahay fanaovana boky firaisankina manampy amin'ny famahanana ireo sahirana indrindra.
Raha te-hahita ny fomba fahandro rehetra ianao dia afaka manao izany amin'ny alàlan'ny fidirana ao amin'ilay faritra fomba fahandro tena voadidy na ao amin'ny resipeo nateraky ny lohahevitra. Azonao atao ihany koa ny mahita ny ambiny amin'ireo lohahevitra izay ifampiraharahanay amin'ny tranonkala noho ny fisaorana ny faritra misy anay.
Ny fomba fahandro rehetra izay miseho amin'ny Thermorecetas efa nomanin'ny mpahandro anay. Izy ireo no fanahin'ity tranonkala ity ary mampiseho ny fahaizany sy ny traikefany ho mpahandro amin'ny lovia tsirairay avy. Ao amin'ity fizarana ity Ampahafantarinay anao ny ekipan'ny fanontana iray manontolo mba hahafantaranao azy ary tsapanao fa ao an-trano ity tranokala ity. Ary raha te-hiaraka aminay ianao izao dia afaka manao izany mameno ity takelaka ity ary rehefa vita dia hifandray aminao izahay raha vantany vao mety.
Irene no anarako, teraka tany Madrid aho ary manana mari-pahaizana momba ny fandikan-teny sy ny fandikana (na dia miasa eo amin'ny tontolon'ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena aza aho anio). Amin'izao fotoana izao, izaho dia mpandrindra ny Thermorecetas.com, bilaogy izay niarahako niasa nandritra ny taona maro (na dia mpanaraka mahatoky aza aho taloha ela be). Eto aho dia nahita toerana mahafinaritra namela ahy hihaona amin'ny olona lehibe ary hianatra fomba fahandro sy tetika tsy tambo isaina. Ny fitiavako ny fahandroana dia avy tamin'izaho mbola kely fony aho nanampy ny reniko nahandro. Ao an-tranoko, ny lovia avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao dia efa nomanina foana, ary ity, miaraka amin'ny fitiavako lehibe ny dia lavitra sy ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny tontolon'ny fahandroana sakafo, dia nahatonga ny androany ho iray amin'ireo fialamboly tiako indrindra. Raha ny marina dia nanomboka tamin'ny tontolon'ny bilaogy aho taona vitsivitsy lasa izay tamin'ny bilaogiko mahandro Sabor Impression (www.saborimpresion.blogspot.com). Taty aoriana dia nihaona tamin'ny Thermomix aho, ary fantatro fa io no mpiara-dia amiko lehibe ao an-dakozia. Androany tsy azoko an-tsaina ny mahandro tsy misy an'io.
Ny anarako dia Ascen ary manana mari-pahaizana momba ny doka sy ny fifandraisana amin'ny daholobe aho. Tiako ny mahandro, maka sary ary mankafy ny zanako kely efatra. Tamin'ny Desambra 2011 dia nifindra tany Parma (Italia) izahay mianakavy. Eto aho manohy manamboatra lovia espaniola fa manamboatra sakafo mahazatra ihany koa avy amin'ity firenena ity aho, indrindra ny faritry ny Parma - mirehareha ny Parmesans ho "lohasaha sakafo" sy fandriana gastronomic any Italia ... -. Hiezaka ny hampita anao io kolontsaina mahandro sakafo io aho, mazava ho azy, miaraka amin'ny Thermomix na miaraka amin'ny Bimby foana, hoy ny Italiana.
Nanomboka tamin'ny fialam-boly mahaliana momba ny fanaovana mofo aho tamin'ny fahazazako 16, ary nanomboka teo dia tsy nitsahatra namaky, nikaroka ary nianatra aho. Fanamby ho ahy ny nanokan-tena tanteraka ho azy sy ny tena fahitana ny hanana Thermomix ao an-dakozia. Mahafinaritra kokoa ny manao sakafo tena izy ary manitatra ny fahalalako ny mahandro sakafo, fanamby ho ahy ary afaka manohy mampianatra fomba fahandro mora sy mamorona.
Teraka tany Asturias aho tamin'ny 1976. Nianatra momba ny asa ara-teknika sy ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany any Coruña aho ary miasa amin'ny maha-mpizahatany mpizahatany ao amin'ny faritanin'i Valencia. Izaho dia olom-pirenen'izao tontolo izao ary mitondra sary, fahatsiarovana ary fomba fahandro etsy sy eroa ao anaty valiziko. Izaho dia ao amin'ny fianakaviana iray izay nisy fotoana mahafinaritra, tsara na ratsy, nivelatra nanodidina ny latabatra, ka hatramin'ny fahazazako dia teo foana ny lakozia tamin'ny fiainako. Saingy tsy isalasalana fa nitombo ny fitiavako tamin'ny fahatongavan'i Thermomix tao an-tranoko. Avy eo tonga ny famoronana bilaogy La Cuchara Caprichosa (http://www.lacucharacaprichosa.com). Io ny fitiavako lehibe hafa na dia ilaiko kely aza. Izaho dia ao amin'ny ekipa mahafinaritra ao amin'ny Thermorecetas, izay iarahako miasa amin'ny tonian-dahatsoratra. Inona no mbola tadiaviko raha toa ny fientanam-poko ao anatin'ny asako sy ny fiantsoako ny fitiavako?
Tiako ny mahandro. Ary manorata. Ka inona no tsara kokoa noho ny bilaogy mahandro? Thermorecetas dia manambatra ny asako sy ny fitiavako. Izay no antony hizarako ny fomba fahandroiko tsara indrindra, namboarina tamin'ny akora ilaina ary koa amin'ny hafanam-po hahatonga anao ho tian'izy ireo.
Silvia Benito no anarako ary niaraka tamin'i Elena aho no nanomboka ity bilaogy ity tamin'ny 2010. Ny fandrahoan-tsakafo ary indrindra ny Thermomix no tena tiako ary hita izany. Nihalehibe tsikelikely aho, nianatra tamin'ny fomba nampianarin-tena; ny mampiavaka ahy dia ny tsindrin-tsakafo .... yum yum yum.
Elena no anarako ary ny iray amin'ny filan'ny nofo dia ny mahandro sakafo, fa indrindra ny mofomamy. Hatramin'ny nahazoako ny Thermomix dia nitombo io fitiavana io ary lasa lasa zava-dehibe ao an-dakozia ity masinina mahafinaritra ity.
Miorina amin'ny vera! Taona vitsivitsy lasa izay dia nanomboka nahaliana ahy ny tontolon'ny gastronomy sy ny fivoarany tao an-dakozia tsirairay. Izaho, izay nanokatra kaontenera fotsiny mba hapetraka ao anaty microwave dia mahatonga izany ho fototry ny sakafoko. Noho ny bilaogera fanta-daza iray dia nanomboka nampiasa ny lakozia mihoatra ny fanokafana vata fampangatsiahana fotsiny aho ary haka na inona na inona. Taorian'ny taona vitsivitsy niasa irery, afa-tsy ny fitaovana ao an-trano indraindray, dia nahazo ilay robot malaza ao an-dakozia izay anamboarako ny ankamaroan'ny fomba fahandro izay arosoko ao amin'ilay fantsona ary manaitra ahy isan'andro ny fampiasana azy. Be loatra ka tsy te hijanona hizara azy aho. MIarahaba anao! Na dia tiako mahandro amin'ny ankapobeny aza dia efa taona vitsivitsy no nanao fanovana kely tamin'ny fahazaran-tsakafo aho noho ny fiandohan'ny fomba fiainana mifototra amin'ny fanatanjahan-tena sy ny fahasalamana. Maro amin'ireo fomba fahandro amboariko no mifototra amin'ny filôzôfia amin'ny fihinanana izay tena ilaintsika mifototra amin'ny masontsivana sy filantsika, manaparitaka aditif sy vokatra izay tsy dia mahasalama toy ny marika lehibe mivarotra antsika indraindray. Izy io dia momba ny fampifanarahana ny fomba fahandro amin'ny alàlan'ny fanoloana akora sasany ho an'ny hafa izay mandeha tsara kokoa (siramamy ho an'ny zava-mamy voajanahary mahasalama toy ny stevia na voamaina manontolo fa tsy voadio). Tsikelikely dia ho hitanao izany.
Cook ny firehetam-po sy ny asa. Hatramin'ny nanombohako nampiasa ny Thermomix taona maro lasa izay dia tsy afa-misaraka an-dakozia tanteraka izahay ... ary nandritra ny taona maro ho avy! Ao amin'ny Thermorecetas dia mamoaka ny fomba fanamboarako tsara indrindra aho hanampiana ny olona rehetra izay manomboka ao an-dakozia mba hahazo ny tsara indrindra amin'izy ireo. Mamaky ve isika?